Hot Dip kwakakurudzira hex dzakaonda nati
Yakakwirira Simba Bolt
Hex bhaudhi & nzungu
Hexagon Flange bhaudhi
Hexagon Musoro Bolt
Hex musoro wega unochera screw
Hex flange musoro wega unochera screw
Csk Musoro kuzviremera kuchera screws
Csk / Truss / Pan musoro unozvidzivirira wega screws
Hex Musoro Wood Wood Zvipenga
Ruvara-Zinc flange bhaudhi
4.8 Bhuruu chena zinc flange bhaudhi
8.8 inopisa inopisa kwakakurudzira hafu shinda hex bhaudhi
Ruvara-zinc hex socket screw
Stainless simbi hex bhaudhi
316 Stainless simbi hex bhaudhi
Kwakakurudzira hex mutete nati
Ruvara-zinc Drywall screw
Bhuruu chena zinc hex socket screw
4.8 yakajeka yakazara tambo bhaudhi
Hot Dip kwakakurudzira sandara sandara
Yakakwira simba chitubu washer
304 Stainless simbi hex yekuwedzera bhaudhi
Yakakura hexagon bhaudhi mukuvaka kwesimbi
Yakanakisa shinda nhema phosphating yakaomawall screws
yepamusoro mhando yekuomesa masikweya kubva kuChina mugadziri
OCILJTU mhando yeAnchor Bolts
Hexagon nut inoshandiswa nemabhaudhi uye screws yekubatanidza nekusimbisa iyo zvikamu.Pakati pavo, nyora I hexagon nati ndiyo inonyanya kushandiswa. Kirasi C nati inoshandiswa kumachini, zvishandiso kana zvivakwa zvine huso hwepamusoro uye yakadzika chaiyo inoda.Chikwata A uye kirasi B nzungu dzinoshandiswa pamachini, zvishandiso kana zvivakwa zvine hunyoro huso uye hwakanyanya kunyatsoita zvinodiwa. Ukobvu m hwerudzi II hexagon nati iri mukobvu, iyo inonyanyo shandiswa mune dzinoitika kana kuisirwa nekukatanura ...
Hexagon nut inoshandiswa nemabhaudhi uye screws yekubatanidza nekusimbisa iyo zvikamu.Pakati pavo, nyora I hexagon nati ndiyo inonyanya kushandiswa. Kirasi C nati inoshandiswa kumachini, zvishandiso kana zvivakwa zvine huso hwepamusoro uye yakadzika chaiyo inoda.Chikwata A uye kirasi B nzungu dzinoshandiswa pamachini, zvishandiso kana zvivakwa zvine hunyoro huso uye hwakanyanya kunyatsoita zvinodiwa. Ukobvu m hwerudzi II hexagon nati mukobvu, uyo unonyanya kushandiswa mune dzimwe nguva apo kumisikidzwa nekukatanura kunowanzodiwa.Hexagon yakatetepa nati ukobvu m yakaonda, inoshandiswa kuve yakabatana zvikamu zvepasi nzvimbo zvine mashoma nguva.
Zita Hexagon nzungu
Maitiro GB、DIN、ISO、ANSI / ASTM
Mashoko Carbon simbi
Pamusoro Nhema oxide, zinc yakafukidzwa (chena), inopisa dip yakamiswa kana maererano nezvinodiwa nevatengi
Kushandisa Simbi zvivakwa, yakawanda-pasi, yakakwira -kukwira simbi mamiriro, zvivakwa, maindasitiri zvivakwa, yakakwira -way, njanji, simbi chiutsi, shongwe, simba chiteshi uye mamwe maumbirwo musangano mafuremu
Zvandakashanda Samples mahara.
Nguva yokutora Mazuva 7-15
Pashure: Countersunk muchinjikwa musoro huni screw
Zvadaro: 304 316 Stainless simbi hex inotungamirwa cap nati.
FOB mutengo: US $ 1050- $ 1500 / ton Min huwandu hwehuwandu: 1000piece / zvidimbu Kupa Mano: mazana maviri pamwedzi Port: Tianjin 、 Shanghai 、 Guangzhou .. Mitero Yekubhadhara: T / T, L / C
Yakafuta hex nzungu
8.8 inopisa inopisa kwakakurudzira hex nati
Kiya hex nzungu
304 316 Stainless simbi hex inotungamirwa cap nati.
Kwakakurudzira thickened hex nzungu
Ruvara-zinc Hex yakatetepa nati